दुुई छिमेकी देशको कूटनीतिमा एउटा मान्यता रहेको छ, ‘तपाईंले सबै कुरा बदल्न सक्नुुहुन्छ तर छिमेकीलाई बदल्न सक्नुुहुन्न । र, जुुन छिमेकीलाई बदल्न सकिँदैन, उसका बारेमा जान्नुु र आफ्नो बुुझाइ बढाउनुु अत्यन्त आवश्यक हुुन्छ ।’ नेपाल भारतको एक छिमेकी देश हो । सामान्यतया यो मानिन्छ कि नेपाल भारतको घनिष्ठ मित्र हो, र यो सत्य हो । दुवै देशको यो मित्रता हजारौँ वर्ष पुरानो हो, जसको केन्द्रमा हाम्रो संस्कृति पनि हो र हाम्रो धर्म पनि । तर, पछिल्लो केही समययता जुन नयाँ–नयाँ विवाद उठेका छन्, त्यस्ता विवाद पछिल्ला ७० वर्षमा कहिल्यै उठेका थिएनन् । नेपालले पहिला भारतको नक्सामाथि आपत्ति जनायो, पछि आफ्नो नक्सा जारी गर्‍यो । त्यसपछि श्रीरामको जन्मस्थान र महात्मा बुद्धलाई लिएर यस्ता दाबीहरू गर्‍यो, जसबाट नयाँ विवादहरूको सुुरुवात हुुँदै गयो । हालका दिनहरूमा जति पनि विवादित बयान आइरहेका छन्, यिनै सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भारतको जी न्युजका प्रधानसम्पादक सुधीर चौधरीले लिनुभएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश ।
तर, ठुल्दाइ ठान्छ कि ? र, हाम्रो संस्कारमा त ठूलो सानो (दाइभाइ)मा प्रेम रहिरहन्छ । हेरौँ न, तपाईं ६८ वर्षको हुुनुुहुुन्छ र मोदीजी (भारतीय प्रधानमन्त्री) ७० वर्षको हुुनुुहुुन्छ, यसरी हेर्दा त्यसै पनि तपाईंको दाइजस्तो हुुनुुहुन्छ । यस हिसाबले कुुनै पनि बेला फोन उठाएर कुुरा गर्न सकिन्छ नि ?
सबै प्रेसिडेन्टसँग, प्रधानमन्त्रीहरूबीच बराबरीको सम्बन्ध हुुन्छ सरकारप्रमुखको हिसाबले । यसमा मोदीजीलाई बराबरीको नाताले सम्बन्ध बनाउन कुुनै आपत्ति छैन । तर, म मोदीजी बराबरको प्रधानमन्त्री हुँ भनेर मैले कुुरा गर्दा नराम्रो मान्ने थुुप्रै मान्छे छन् । अनि मैले के गरुँ ? म हरेक मान्छेको पछाडि त लाग्न सक्दिनँ ? म देशहरूको कुरा गरिरहेको छु । व्यक्तिको कुरा होइन ।
दुुवै हाम्रा छिमेकी हुुन् । र, छिमेकीलाई बदल्न सकिँदैन । आकारमा, जनसङ्ख्यामा, विकासमा अगाडि छन्, दुुवै । हाम्रा लागि यो खुुसीको कुुरा हो । हामीले यदि उत्पादन गर्न सक्यौँ भने यी हाम्रा बजारहरू हुन् । र, यदि उत्पादन गर्न सकेनौँ भने तिनको उत्पादन हामीले भोग गर्नुुपर्छ । हाम्रो बीचमा जुुन व्यापारिक असमानता, उत्पादजन्य जो असमानता छ, असन्तुुलन छ, तिनलाई हामी हटाउन चाहन्छौँ । दुुई फरक–फरक राजनीतिक प्रणाली, आर्थिक र सामाजिक प्रणाली पनि, यसमा पनि केही भिन्नता छन् । यस्ता छिमेकीको बीचमा हामी छौँ । र, दुुवै छिमेकीसँग हामीले सन्तुुलित सम्बन्ध राख्न चाहेका छौँँ । एउटा कार्ड अर्कोसँग खेल्नुुपर्छ भन्ने छैन । त्यस्तो हामीले गर्दैनौँ । यदि खेल्यौँ भने त्यसले कसैलाई पनि फाइदा पुुर्‍याउँदैन । कार्ड खेल्ने र छक्काउने काम गर्नुहुँदैन । हामी यो शैली अपनाउँदैनौँ ।
तर, म तपाईंलाई भारतका मान्छेहरूको सेन्टिमेन्ट बताउन चाहन्छु । चीनसँग भारतकोे गलवानमा विवाद भयो, लद्दाखमा विवाद भयो । फेरि संवाद बन्द भयो । लगातार यो चलिरहेको छ । तर, यो (विवाद) हुुनेबित्तिकै तपाईंले पनि कालापानी विवाद उठाइदिनुुभयो । तपाईंले पनि नक्सा बदल्नुुभयो । र, मान्छेहरूलाई यो सबै एकसाथ किन हुुन थाल्यो भन्ने लाग्न थाल्यो । र, मान्छेहरू (भारतीय) लाई लाग्न थाल्यो कि नेपालले त यतिबेला चीनविरुद्ध वक्तव्य दिनुुुपथ्र्यो, जब कि भारतले अन्य थुुप्रै देशहरूबाट समर्थन पायो । उनीहरूले यस्तो हिंसात्मक गतिविधि एलएसीमा हुुनुुहुुँदैन भने । तर, नेपालले भनेन । बरु नेपालले आफ्नो ‘टेरिटोरी’ चाहिन्छ भनेर बोल्न सुुरू गर्‍यो ।
तपाईंको कुरा अलि भड्काउने खालको छ । अन्यथा नमान्नुुहोला । गलवानसँग हाम्रो लिनुु–दिनुु केही छैन । तपाईंलाई म यो सम्झाउन चाहन्छुु कि दिल्लीले आफ्नो आठौँ संस्करणको नक्सा प्रकाशित गर्‍यो । कस्मिर र लद्दाखको कुुरा थियो, त्यहीँ सीमित हुुनुुपर्ने थियो । त्यसमा नेपालको टेरिटोरी सामेल गर्नुुपर्ने कुुनै जरुरत थिएन । हामीले त्यो नक्साको विरुद्धमा कूटनीतिक नोट पठायौँ । वार्ताको प्रस्ताव राख्यौँ । र भन्यौँ– वार्ताको माध्यमबाट यो असमझदारीको समाधान गर्नुुपर्छ । तपाईंले प्रकाशित गर्नुभएको आठौँ संस्करणको नक्सा ठीक भएन भन्यौँ । त्यसको कुुनै ‘पोजिटिभ रेस्पोन्स’ भएन । अब गलवानसँग हाम्रो के लिनुु–दिनुु छ र ? तपाईंले नक्सा नै प्रकाशित गर्नुुभयो त्यही बेला, र हामीले लेख्नुुपर्‍यो कि यस्तो गर्नुहुँदैन भनेर ।
फेरि बाटो बनाइयो हाम्रै टेरिटोरीमा र उद्घाटन गरियो । हामीले फेरि कूटनीतिक नोट लेख्यौँ, संवाद गर्न आग्रह गर्‍यौँ । यो ठीक भएन भन्यौँ । यसमा गलवानसँग के लिनुु–दिनुु भयो र ? त्यही समयमा उद्घाटन किन गर्नुुपरेको थियो र ? अब बताउनुुस्, गलवानसँग हामीलाई कसरी जोड्न मिल्छ ?
तपाईंको प्रश्न साह्रै राम्रो छ । मलाई आशा छ, हाम्रो पार्टीले बहुुमत ल्याउँछ । साह्रै नै कमजोर स्थिति भयो भने पनि प्रमुख पार्टी हामी नै हुुनेछौँ र चुुनावपछि पनि सरकारको नेतृत्व हामीले नै गर्नुपर्ला सायद । त्यसकारण म आश्वस्त गर्न चाहन्छु सबै साथीहरूलाई कि नेपाल र भारतको सम्बन्धलाई थप उचाइमा पुुर्‍याउनका लागि हामीले अझ बढी योगदान गर्न सक्छौँ ।
नेपाल जो अस्तित्वमा छ, सन्तुलित नीतिका साथ, तटस्थताको नीतिका साथ । हाम्रो साइड किन लिएन भनेर, हाम्रो पक्षमा किन बोलेन, हुटिङ गरेर हाम्रो तागत किन बढाएन भनेर एकछिनका लागि नराम्रो लाग्न सक्छ । तर, दीर्घकालीन नतिजाका बारेमा सोच्ने हो भने हाम्रो तटस्थता, कसैका लागि पनि हाम्रो धर्ती, हाम्रो आकाश प्रयोग गर्न नदिने भावना सबैका लागि हितकर नै हो । यो त एकप्रकारको प्रतिरक्षाको पर्खाल भयो नि, होइन र ? तसर्थ, हामी चाहन्छौँ कि हाम्रा छिमेकीहरू आ–आफ्नो विकासको काममा लागून्, परस्पर सहयोग गरून्, आ–आफ्ना वैज्ञानिक अनुुसन्धान, आ–आफ्ना टेक्नोलोजी सेयर गरून् । यो जमाना हो– एसियाको । जहाँबाट वास्तवमा सभ्यता सुुरु भएको हो । र, यी जुन हाम्रा महान् छिमेकी देशहरू हुुन् । यिनको भूूगोल, सभ्यता, जनसङ्ख्या, इतिहास आफैँमा गौरवपूूर्ण छन् । तर, यहाँका शासकहरूको कमी–कमजोरी, खासगरेर विज्ञान तथा प्रविधिको जुन सुुरुमा विकास भयो, त्यसको प्रयोग हामीविरुद्ध भयो, एसियाविरुद्ध भयो । भारतजस्तो देश, के कमी थियो र गरिब रह्यो ? हिमालदेखि हिन्दमहासागरसम्म । के कमी थियो चीनमा ? के जनसङ्ख्या थिएन काम गर्नका लागि ? जवान जनसङ्ख्या, जनसाङ्ख्यिक लाभ दुवैलाई थियो । किन ? किनकि साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीको प्रयोग यिनको विरुद्ध गरियो । हामी त उपनिवेश कहिल्यै भएनौँ तर उपनिवेश नबने पनि गरिब त बन्यौँ । किनकि तिनको जुन असर थियो, त्यो हामीमाथि पनि पर्‍यो । अब त्यो जमाना गयो ।
भारतमा २०१४ पछि जब देशका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी बन्नुभयो, त्यसपछि राष्ट्रवादको लहर आएको छ । एउटा नयाँ माहोल सिर्जना भएको छ । के तपाईंले पनि आफ्नो नेतृत्वमा नेपालमा त्यस्तै वातावरण बनाउने कोसिसमा हुनुहुन्छ ? भारतले पश्चिमी देशहरूसँग जुन व्यवहार गरिरहेको छ, चीनसँगको भारतको व्यवहार छ, बराबरीको दर्जाको माग गरिरहेको छ, त्यही व्यवहार नेपालसँग गरिरहेको छ । तर, तपाईँको नजर सबैभन्दा पहिला भारतमाथि नै गयो किन ?
भारत र नेपालबीच साँस्कृतिक ऐतिहासिक एकरूपता छ । यसलाई कायम राख्न तपार्इंले के–कसरी कदम चाल्नुहुन्छ ? अहिले जुन स्थिति सिर्जना भएको छ, केही विवादहरू अगाडि आएका छन्, यसलाई समाधान कसरी गर्नुहुन्छ ? अहिले चीन पनि विस्तारवादी सोचका साथ अगाडि बढिरहेको छ, यस विषयमा तपाईँ के सुझाव दिनुहुन्छ ?
जब तपाईं भारतको विषयमा कुराकारी गर्दै हुनुहुन्छ भने भारतसँग धेरै भाषा हाम्रो मिल्दोजुल्दो छ । जस्तै अहिले म हिन्दीमा बोल्दै छु नमिलेको हिन्दी । यो पढेको हिन्दी होइन, यत्तिकै बोलिहालेँ । यहाँ नेपालमा धेरै मान्छे हिन्दीमात्रै होइन, नेपाली पनि बुझ्दैनन् । धेरै भाषाभाषी छन् यहाँ । तर, एउटा कुरा तपाईँले के बुझ्नुपर्नेछ भने हाम्रो कोसी नदी, गण्डकी, कर्णाली नदी भारतमा गएर मिसिन्छन् । नदीका माछालाई बोर्डर (सीमा) भनेको के हो थाहा हुँदैन ।
यदि चीनले तपाईँसँग यस्तो गरेको भए के तपाईँ चीनसँग पनि त्यही गर्नुहुन्थ्यो त ?
हामी हाम्रो सार्वभौमसत्ता र भूमि अखण्डताको विषयलाई लिएर कसैसँग कम या कसैसँग बढी व्यवहार गर्दैनौँ । कसैले गरेको राम्रो, कसैले गरेको नराम्रो भन्ने हुँदैन । कसैले गलत गर्छ भने त्यो ठीक, कसैले गलत गर्छ भने त्यो सही हुँदैन । हामी सबैसँग समान व्यवहार गर्छौँ । सबैसँग समान व्यवहार ।